नेपाली कांग्रेस १४ औं महाधिवेशन, सभापतिमा दर्जन नेता आकांक्षी « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
नेपाली कांग्रेस १४ औं महाधिवेशन, सभापतिमा दर्जन नेता आकांक्षी
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन नजिकै आइसकेको छ । हाल कांग्रेसको जिल्ला अधिवेशन हुन गैरहेको छ । यस पटकको महाधिवेशनमा सभापतिमा उमेदवारी दिनेको संख्य औंलाले गनेर नभ्याइने भएको छ । यस विषयमा राजनीतिक विस्लेषकहरुले र सञ्चारमाध्यमहरुले विभिन्न कोणबाट लेखाजोखा गर्न थालेका छन् ।
संस्थापन पक्षका नेताहरु प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता विमलेन्द्र निधि सभापतिमा आकांक्षी देखिएको छ । त्यस्तै पौडल समूहका नेताहरु रामचन्द्र पौंडेल, डा. शेखर कोइरला, डा. शशांक कोइराला, र प्रकाशमान सिंह सभापतिको आकांक्षी हुन् । त्यसैगरी आफूलाई तेस्रो धारको भन्न रुचाउने नेता कृष्ण प्रसाद सिटौंला पनि सभापतिमा आकांक्षी देखिएका छन् । युवा नेता युवराज न्यौपानेले सभापतिको उमेदवार घोषणा नै गरिसकेका छन् ।
त्यसैगरी नेताहरुपनी अघोषित सभापतिको आकांक्षी देखिएका छन् । केन्द्रीय महाधिवेशन हुन अब आधा महिना बाँकी छ । यो समयमा कस्ले कस्लाई साथ दिने को—को मिलेर साझा उमेदवारी दिने जनताको चाँसोको विषय बनेको छ । सभापती शेर बहादुर देउवाले धेरै पटक पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका छन् ।
आगामी दिनमा फेरि पनि सभापतिमा दोहोरीने सम्भावना पनि उतिकै छ । सभापतिमा देउवा दोहोरीने, अन्य नेताहरु नेतृत्वमा आउने र युवा नेतृत्व आउने कुरामा सम्पूर्ण नेपालीको ध्यान केन्द्रीत भएको छ ।
हालको समयमा जिल्ला अधिवेशन भैरहेकोले नेताहरुको भेटघाट सुन्य भएको छ । केही दिनमा नै सभापति लगायतमा पदाधिकारीहरुमा कसले उमेदवारी दिने र कस्ले फिर्ता लिने चलखेल र छलफल बढ्ने देखिएको छ । एउटा पदमा यति धेरै आकांक्षी हुनुमा कांग्रेसले लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्दै आएको छ । तर यति धेरै प्रतिसपर्दा आगामी दिनमा पार्टीलाई कमजो बनाउने बाटो पनि हुन सक्छ ।
पार्टी भित्रबाटै पुरानो पुस्ताले आराम गर्नु पर्ने भनेर नेतृत्वले र शिर्ष नेताहरुले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको आलोचना भैरहेको छ । पटक—पटक नेतृत्वमा दोहोरीदा पार्टीप्रतीको जनताको विस्वास नै गुम्ने युवा नेताहरुको बुझाई छ । यस्ता विभिन्न कोणबाट हेर्दा सभापतिमा कस्ले बाजी मार्छ भनेर अहिले नै कुनै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन् ।
प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०७८, बिहिबार १ : ०७ बजे